Ọhụrụ ka OS X? Nke a bụ aghụghọ iji jikwaa OS X | Esi m mac
Pedro Rodas kwuru | | Apple, OS X Yosemite
Ihe ohuru nke 12 nke anụ ọhịa MacBook na ọla edo na 1,2 GHz processor, 8 GB Ram na 512 GB SSD alọtala n’oge ekeresimesi a. Ihe mbụ enwere m ike ịchọpụta bụ na akụkọ ọ gụnyere gụnyere ya pụrụ iche.
N'agbanyeghị ihe niile enwere ike ikwu na nzukọ ịntanetị, kọmpụta anaghị adị nwayọ ma nwee ike ịrụ ọrụ nke onye ọrụ ọ bụla na-enweghị atụ n'ụzọ pụrụ iche. Ọdịdị ya na-akparị m, agba ọla edo na-eme ka m daa n'ịhụnanya na ForceTouch nke trackpad ya ya na sistemụ igodo ọhụrụ na ngosipụta Retina, ọ na - emecha ngwaahịa ahụ.
O doro anya na ị bụ otu karịa Krismas a ejiriwo nwee otu n'ime ihe ebube ndị a na ọ bụ ya mere ugbu a, ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ na usoro okike Apple. ị ga-amalite ịmụ ins na outs nke sistemụ OS X.
Ozugbo ị banyere sistemụ, ihe mbụ ị ga-eji mara onwe gị bụ ebe a na-achịkwa ikpe niile n'ime ya, ọ bụ Mmasị Mmasị. Enwere ike ịchọta ngalaba a na Launchpad> Mmasị usoro, na desktọọpụ desktọọpụ (akara ngosi gia) ma ọ bụ site na ịchọ site na Chakwasa ihie n'elu aka nri nke desktọọpụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e kewara windo ahụ n'ọtụtụ ahịrị na nke ọ bụla na-esochi ngalaba nke ọ bụla enwere ike ịhazi. N’isiokwu a, ihe anyị ga - agwa gị bụ na ha dị adị mkpirisi keyboard iji nweta ngalaba ụfọdụ dị na Mmasị Sistem.
Tozọ iru ha dị mfe ma bụ na ndị injinia ngwanrọ Apple nwere ụzọ mkpirisi keyboard maka ọtụtụ ihe. N'okwu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ụda panel ozugbo, naanị ihe anyị ga-eme na keyboard bụ pịa bọtịnụ «alt» na igodo ọ bụla dị na F10, F11 ma ọ bụ F12 ndị bụ igodo maka ụda na keyboard.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta njikwa ihuenyo anyị ga - pịa igodo «alt» na F1 ma ọ bụ F2. Ya mere, anyị nwere ike ime n'ụzọ yiri nke ahụ na nhọrọ ndị ọzọ dị na igodo ọrụ ọ bụla. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ihe ọhụrụ na ngwa ngwa ụzọ nwee ike ịnweta akụkụ ụfọdụ nke Mmasị sistemụ na ntabi anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » OS X Yosemite » Ọhụrụ ka OS X? Nke a bụ aghụghọ iji jikwaa ngwa ngwa ngwa ngwa
Apple TV ọhụrụ nwere ọ theụ n'abalị nke 31 rue ...